Puntland Voice – Page 996 – Codka Dalka iyo Dadka
Shir Maanta Magaalada Kambaala uga furmaya Madaxda Midowga Afrika
Kambaala (AB):-Magaalada Kambaala ee Xarunta Dalka Uganda waxaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo shir ay leeyihiin madaxda Midowga Afrika kuwaasoo waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ay ugu horeyso xaalada Soomaaliya. Shirkaani oo ku soo aaday xili dhawaan qarax lala […]
Askarta Boliiska Dowlada KMG oo Saaka mar kale baaritaano iyo qab qabasho dad ka sameeyay Magaalada Muqdisho.
Muqdisho (AB):-Degooyinka ay maamusho Dowlada KMG Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa mar kale saaka ay ciidamada Dowladu ka sameeyeen howlgalo ay wax ku baarayeen dadna ku soo qabqabteen. Degmooyinka Waaberi,Wadajir iyo Xamar jajkab ayaa ciidamada saaka lagu arkayay iyagoo […]
Madaafiic dhimasho badan sababtay oo xalay lagu garaacay Xafado ka tirsan Degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan.
Muqdisho (AB):-Dad badan oo rayid ah ayaa xalay ku geeriyooday xaafadaha Degmooyinka Yaaqshiid iyo Kaaraan kadib markii xaafadahaasi ay xalay fiidkii ku hoobteen tiro madaafiic ah. Guri ku yaal xaafada Towfiiq ee degmada Yaaqshiid ayaa mid ka mid ah madaafiicdaasi […]
Dowlada iyo Ururka Ahlus una oo ku dagaalamay Degmada Dharkeenley
Muqdisho (AB):-Ciidamo la sheegay inay ka kala tirsan yihiin Dowlada KMG Soomaaliya iyo Ururka Ahlu suna ayaa ku dagaalamay Magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenleey waxaana dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ugu yaraan […]
Sarkaal ka tirsan Xarakada Alshabaab oo ka sheegay Masjidka Nasrudiin Salaadii Jimcaha ee shalay in jimaha soo socda ay ku tukan doonaan Madaxtooyada.
Muqdisho (AB):-Salaadii jimcaha ee shalay ayaa waxaa Masaajidka Nasrudiin soo xaadirey saraakiil sar sare oo ka tirsan Xarakada Mujahidiinta Alshabaab iyo shacab aad u badan kuwaaso dhamaan gudanayay tukashada salaaaasi Jimcaha. Madaxa Dacwada Xarakada Alshabaab Sheekh Burchaan oo khubad ka […]
Wareysi toos ah oo lala yeeshay Faramuggo-da Jarmalka
Waxaan ku qasbanaa inaan u sii maro laacibiintii hore ee qirtay inay gef ka galeen qaranka Aljeria koobkii adduunka 1982-kii si aan balan ula sameysto Faramuggo (Caaro-badeedka) Paul, inkastoo uu ka xumaa waxa laga sheegayo saadaalintiisa, iyo xanaaqa ay Jarmalka […]
Madaafiic xalay ilaa saaka lagu garaacay Xaafadaha Waqooyiga Muqdisho.
Muqdisho (AB):-Duqeymo madaafiic oo ka imaanaysay dhanka Ciidamada AMISOM ayaa xalay oo dhan ilaa saaka lagu garaacayay xaafadaha Waqooyiga Magaalada Muqdisho. inta badan dadka ku harsan xaafadaasi ayaan xalay si hagaagsan u seexan,daryanka madaaiicda darteed oo aarkood xaafadahooa ay ku […]
Qarax xalay ka dhacay Degmada Waaberi iyo ciidamada Dowlada oo Saaka howlgalo baahsan ka wada degmadaasi.
Muqdisho (AB):-Askar ka tirsan kuwa Boliiska Dowlada KMG Soomaaliya ayaa saaka howlgalo waxay ka wadaan wadooyinka Muqdisho qaarkood gaar ahaan degmada waaberi halkaasoo xala qarax uu ka dhacay. Ujeedada howlgalada ayay saraakiisha dowladu sheegeen inay ku baadi goobayaan dadkii ka […]
Hay’ada Qaxootiga Dunida oo Maanta ka codsatay Maamulka Puntland inuu hakiyo dadka laga saaryo dhulkaasi.
Geneva (AB):-War maanta ka soo baxay hay’ada Qaxootiga Dunida UNHCR ayaa ka codsatay Dowlad Goboleedka Puntland inuu hakiyo oo gabi ahaanba joojiyo dadka reer koonfureeda ee ay ka saareyso dhulkaasi. Warka Hay’ada oo laga soo saaray Xafiiskooda Magaalada Geneva waxaana […]
Shirka ka socda Dalka Jaad oo siu rasmi ah u furmay iyo Madaxweyne Shariif oo ka qeybgalaya.
Wararka ka imaanaya Dalka Jaad ayaa sheegaya in dalkaasi uu si rasmi ah uga furmay shirka dalalka Siin iyo Saad ama dalalka saxaraha ka hooseeya kaasoo ay kla qeyb qaadayaan madaxweynayaasha dalalkaasi. Madaxweynaha Dowlada KMG Soomaaliya Sh.shariif oo shirka ka […]